Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: March 2008
Burma Ethnic Video
Weekly Ethnic News Perspective
What's Ethnic Nationalities' Voice တိုင်းရင်းသားအသံဆိုတာဘာလဲ
Listen to Ethnic Voice တိုင်းရင်းသားအသံနာထောင်ရန်
The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".
တိုင်းရင်းသားအသံဆိုတာ တရားမျှတမှု၊တန်တူအခွင့်အရေး၊လွတ်မြောက်ရေး၊စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု။ဒီမိုကရေစီ၊ နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်ခွင့်အသံများဖြစ်ပါသည်၊
"တရားတဲ့စစ်ပွဲဟာ မတရားတဲ့စစ်ပွဲကို အမြဲအောင်ရမည်"
Monk-Led Protests Show Buddhist Activism
Posted: 2008-03-29 14:10:44
BANGKOK, Thailand (AP) - Buddhist monks hurling rocks at Chinese in Tibet, or peacefully massing against Myanmar's military, can strike jarring notes.
These scenes run counter to Buddhism's philosophy of shunning politics and embracing even bitter enemies - something the faith has adhered to, with some tumultuous exceptions, through its 2,500-year history.
But political activism and occasional eruptions of violence have become increasingly common in Asia's Buddhist societies as they variously struggle against foreign domination, oppressive regimes, social injustice and environmental destruction.
More monks and nuns are moving out of their monasteries and into slums and rice paddies - and sometimes into streets filled with tear gas and gunfire.
"In modern times, preaching is not enough. Monks must act to improve society, to remove evil," says Samdhong Rinpoche, prime minister of the Tibetan government-in-exile andahigh-ranking lama.
"There is the responsibility of every individual, monks and lay people, to act for the betterment of society," he told The Associated Press in Dharmsala, India, discussing protests in Tibet this month that were initiated by monks.
In widespread protests over the past three weeks, crimson-robed monks - some charging helmeted troops and throwing rocks - have joined with ordinary citizens who unfurled Tibetan flags and demanded independence from China. Beijing's official death toll from the rioting in Lhasa is 22, but the exiled government of the Dalai Lama says 140 Tibetans were killed there and in Tibetan communities in western China.
Bloodshed also stained last fall's pro-democracy uprising in Myanmar, dubbed the "Saffron Revolution" after the color of the robes of monks who led nonviolent protests against the country's oppressive military regime.
In Thailand, followers ofaBuddhist sect took part in street demonstrations which led to the ouster of Prime Minister Thaksin Shinawatra two years ago.
In Sri Lanka, the ultra-nationalist Jathika Hela Urumaya party, led by monks, has pushed for using brute force against the country's Tamil rebels. In 1959amonk assassinatedaprime minister overalaw giving some protection to the Tamil language.
Indeed, the activism reflects another side of Buddhist history. Despite the faith's image of passivity, an aggressive strain has long existed, especially in the Mahayana school of Buddhism, practiced in Japan, Korea, China and Tibet.
The sohei, monks in Japan, fought pitched battles with one another and with secular clans for over 600 years until around 1600. China's Shaolin Temple,amartial arts center to this day, was allowed to retain warrior monks from the 7th century by emperors who sometimes used them to put down rebellions and banditry.
The monk Saya San becameanational hero in the 1930s in Myanmar - then Burma - by leadingarevolt. The British colonials hanged him after fielding 12,000 troops to suppress his peasant army.
The self-immolation of monk Thich Quang Duc onaSaigon street became an iconic image of protest against the Vietnam War.
Before China's takeover of Tibet in 1959, warrior monks sometimes wielded more power - and weaponry - than the army. Lhasa's Sera monastery,ahotbed of the recent protests, was particularly noted for its elite fighters, the "Dob-Dobs," who in 1947 took part inarebellion that took 300 lives.
"Use peaceful means where they are appropriate, but where they are not appropriate, do not hesitate to resort to more forceful means," said the previous, now deceased Dalai Lama when Tibet fought the Chinese in the 1930s.
Christopher Queen, an expert on Buddhism at Harvard University, says the new trend among some of the world's 350 million faithful is expanding from individual spiritual liberation to attacking problems such as poverty and environmental blight that affect whole communities or nations.
Sri Lanka's Sarvodaya Shramadana, or "Mundane Awakening," provides everything from safe drinking water to basic housing in more than 11,000 poor villages. And in India, Buddhist groups are fighting for the rights of "the untouchables," the lowest caste.
Global and loosely affiliated, originating at the grass roots rather than atop religious hierarchies and more muscular than meditative, this movement is widely known as Engaged Buddhism.
"Engaged Buddhists are looking at the social, economic, and political causes of human misery in the world and organizing to address them. The role of social service and activism is clearly growing in all parts of the Buddhist world," Queen said in an interview.
While not immune to spilling blood, Queen says "the Buddhist tradition is rightly known for the systematic practice of nonviolence." That leads scholars to doubt it will turn to terrorism or sustained violence other than occasional spontaneous outbursts. They note that Buddhism doesn't advocate killing heretics or otherwise spreading the faith by force.
Indeed, the Dalai Lama has decried the recent violence while supporting peoples' rights to peaceful protest. And Samdhong, the prime minister-in-exile, adds: "If (monks) want to fight, they have to disrobe and join the fighters."
Associated Press writers Anita Chang in Beijing, Ben Stocking in Hanoi, Ambika Ahuja in Bangkok, Burt Herman in Seoul, Gavin Rabinowitz in Dharmsala and Ravi Nessman in Colombo contributed to this report
Posted by တိုင်းရင်းသားအသံ Tine Yin Thar Voice
သတင်း သတင်း။ News
အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲ ပြန်ဝင်ရန် အက်စ်အက်စ်အေ တိုက်တွန်း
မတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။
လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို အပစ်ရပ်အဖွဲ့များက ထောက်ခံလျှင် လက်နက်ချရမည့် အခြေအနေ နှင့် မလွဲမသွေ ကြုံကြ ရမည်ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာများကို လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး စုပေါင်း တိုက်ပွဲဝင် ဖြေရှင်း ရန် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ယင်းသို့ တိုက်တွန်းရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူတောင်ရေးကောင်စီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ် မှူး စိုင်းလောင်ဝ်စိုင်းက ယခုလိုပြောသည်။
“အခုကာလမှာဆိုရင် သူတို့အတွက်ဟာ အချိန်သိပ်မရှိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဥပမာ ဒီရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဒီ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးတွေဖြစ်တဲ့ သူတို့ အခန်းကဏ္ဍဟာ သူတို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါပြီ။ ဥပဒေဘောင်အတွင်း ၀င်ရောက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ပြဌာန်းလာမယ့် ဥပဒေကတော့ မြန်မာပြည်မှာ တပ်မတော် တခုထဲသာ ရှိရမှာပါ။ ဒီလိုဆိုရင် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ချင် တယ်ဆိုရင် တပ်မတော်တွင်းကို ၀င်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ ၀င်ရောက် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တပ်နာမည်ကိုလည်း ဖျောက်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလို အဖြစ်ခံမှာ လား၊ ကိုယ်ကလက်နက်ကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ ကိုယ်ရယူလိုတဲ့ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ပြန်ပြီးတော့ တိုက် ယူမှာလား အဲဒီ လမ်းနှစ်လမ်းကို သူတို့ရွေးချယ်ရတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့က သူတို့ကို အဲဒီလို ပုံစံမျိုးနဲ့ တိုက်တွန်းထားတာပါ ခင်ဗျား။ ”
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အခြေခံဥပဒေသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် အညီ ရေးဆွဲထားခြင်း မဟုတ်သလို ၁၉၉၀ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ ပါဝင်ရေးဆွဲခြင်း မရှိဘဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေး အတွက်သာ ရည်ရွယ် ရေးဆွဲ ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူတောင်ရေးကောင်စီက သုံးသပ်သည်။
စစ်အစိုးရကအတည်ပြုရန် ပြင်ဆင်နေသော ယင်းအခြေခံဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားများ အတွက် အာမခံချက် မရှိသောကြောင့် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူတောင်ရေးကောင်စီနှင့် ယင်း၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သော ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (တောင်ပိုင်း) အနေဖြင့် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်မှတပါး အခြားရွေးစရာ မရှိဟု ဗိုလ်မှူးစိုင်းလောင်ဝ် စိုင်းက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဥက္ကဌကြီး ပြောထားတာကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င် မယ်ဆိုရင်လည်း လွတ်တော်မှာ ကျနော်တို့ နေရာ ဘယ်လောက်ပဲ ရနိုင်မလဲ။ ဒီတော့ နိုင်ငံရေး ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ လွတ်တော် အတွင်းမှာ တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီနည်းက ကျနော်တို့အတွက် အကျိုးအမြတ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့မှာ ရွေးစရာလမ်းဆိုတာ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတလမ်းသာ ကျနော်တို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလို့ ကျနော်တို့ ဥက္ကဌကြီးက ညွှန်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျား။”
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သော ပင်လုံစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များကို မြန်မာစစ်အစိုးရ က အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းမရှိ၍ နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ အလိမ်မခံကြရန် ၄င်းတို့၏ ကြေညာချက်တွင် ထောက်ပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအရေး ဖြေရှင်းရန်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား ဖြိုဖျက်ရန် အခြေခံဥပဒေအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူတောင်ရေးကောင်စီက တိုက်တွန်းထားသည်။
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူတောင်ရေးကောင်စီသည် မြန်မာပြည်ရှိ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးအဖြေရှာရန် အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် အတွင်းက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သော် လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် မရောက်လာ၍ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
Posted by တိုင်းရင်းသားအသံ Golden Saw Khu
ဒီသတင်းကို ဖတ်မိတဲ့အခါ ငါတို့ရဲ. တိုင်းပြည်းဟာ လူသားတွေနေထိုင်ရမည့်တိုင်းပြည်မဟုတ်တော့ဘူး လို့မှတ်ယူပါသည်၊ ဒီစစ်အစိုးရဟာ လုံးဝလုံးဝကို လူသားတို့၏စိတ်ဓါတ်မရှိတော့ဘူး ဆိုတာသေချာနေပြီ၊ The Lord of The Ring ဇာတ်ကားလိုပါဘဲ၊ မီးတောင်ပေါ်မှာ ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်တည်ဆောက်ထားသော သရဲစစ်တပ်တွေအားလုံးနိဂုံချုပ်ဖို့အတွက် သူတို့၏ပျော့ကွက်(Weak Point) ဖြစ်သောပြည်သူလူတွေမထောက်ခံမှု နှင့် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများစိတ်ပျက်မှုတွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး သရဲစစ်တပ်တွေအားလုံးကို တစ်ခါတည်းသတ်နိုင်တဲ့ တန်ခိုးကြီးသောလက်စွပ်သကဲ့သို့ လူထုတွေ စုစည်းအောင်လုပ်ပေးနေသော လုထုဆန္ဒခံယူပွဲတွေကို အာဏာရှင်အဆုံးသတ်ပွဲအဖြစ်သို့အသွင်ကူးပြောင်းကြစို့၊
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ လမ်းလျှောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံနေရ
Gambari misled UNSC: 88 generation students
New Delhi – A Burmese pro-democracy activist group, calling on the people to prepare for the worst in 'confronting' the junta, today said the UN special envoy to Burma has deviated from his primary objective.
The 88 generation students, inajoint statement released today with the All Burma Monks' Alliance (ABMA), accused UN special envoy to Burma Ibrahim Gambari, whose mission it is to facilitate political reform through dialogue between the junta and opposition groups, of siding with the junta's unilateral approach aimed at legitimizing its continued rule.
The group said Gambari misled the UN Security Council during his recent briefing in New York. Despite hoping that Gambari would urge the Security Council to strengthen the Secretary-General's mandate, 88 generation and the ABMA instead argue he showed signs of support for the junta's plans.
"From the perspective of the people of Burma, he altered his mission from pressuring and persuading the military junta in Burma to createacredible process of constitution writing and engage inameaningful and time-bound dialogue with our leader Daw Aung San Suu Kyi," the statement read.
"Instead, it now appears he is supporting the one-sided acts of the military junta and suggesting that democracy forces surrender," added the student activists.
While acknowledging that his latest trip to Burma yielded no tangible results, Gambari, on March 18, told the Security Council that his last visit should be assessed within the broader context of efforts over the past two years.
"Two years ago, there had been no dialogue with the authorities and, only six months ago, there had been no mechanism for promoting dialogue between the Government and Daw Aung San Suu Kyi," Gambari had said, implying that his mission has producedafew results.
Soe Tun, one of the few members of 88 generation group who is still able to operate while hiding to avoid arrest, said, "What we want Gambari to do is to clearly see the situation in Burma and honestly admit that the junta cannot be engaged with this limited mandate and call for the UNSC to strengthen the Secretary-General's mandate."
Soe Tun, who spoke to Mizzima from his hiding place, said that with the UN's impotency concerning the ruling junta, the people of Burma are left on their own in confronting the military regime.
"But we will not give up, we will continue with our struggle until we gain democracy," said Soe Tun, adding that the group has called on the people to casta'No' vote in May's upcoming referendum.
In resisting the perpetuation of military rule in Burma, 88 generation and the ABMA have concluded it is the best to vote 'No' against the junta's draft constitution, which the junta expects to be approved inareferendum in May.
With the junta already announcingapenalty of at least three years detention for those who criticize or disturb the referendum process, 88 generation said the safest way for the people to demonstrate their true desire is to vote 'No'.
"We are urging the people to express their dissent against the junta utilizing the safest means possible," Soe Tun remarked, adding that by castinga'No' vote the authorities cannot charge the people withalegal offense, whereas if the people abstain they may be construed as boycotting the poll which may in turn draw the ire of authorities and cause trouble for the people.
He went on to say that the group has initiatedacampaign to raise awareness of the referendum and related issues among the population by clandestinely distributing VCDs of speeches and T-shirts that oppose the junta's scheme.
Meanwhile,afew groups of activists who are clandestinely operating inside Burma said they are taking an extreme measure in opposing the junta, urging people to totally boycott the junta's seven-step roadmap, including the referendum.
Soe Tun commented, "We welcome such moves, though we are not campaigning for that. We welcome any movement that opposes this dreadful military dictatorship."
He added that with the ruling junta desperately wanting the people to vote in favor of the constitution, the junta could be aggressive in their campaign, possibly leading to violence and bloodshed.
"We are prepared to confront the worst. We are working for truth and justice, and we will prevail," the students said.
"With or without the help of the UN Security Council, we are ready to determine our own future. Daw Aung San Suu Kyi recently told us to 'hope for the best, prepare for the worst'."
ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို ကန့်ကွက်ရန် ကချင်ကျောင်းသားများ လှုံ့ဆော်
သတင်း - သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက်
Tuesday, 25 March 2008 22:25
လှုံ့ဆော်စာတွင် အတင်းအဓမ္မ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်အတည်ပြု လူထုဆန္ဒခံယူပွဲအား ကန့်ကွက်မဲပေးကြ၊ ကချင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဟု ရေးသားထားကာ မြစ်ကြီးနားတွင် အေဖိုးစာရွက် အစောင် ၅၀၀ နှင့် ၀ိုင်းမော်တွင် အစောင် ၁၀၀ခန့် ကပ်ခဲ့သည်ဟု ယင်းလှုပ်ရှားမှုတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူ ကျောင်းသားတဦး က ပြောသည်။
ဤလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ပြည်သူလူထုသည် မေလတွင် ကျင်းပတော့မည့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ပြတ်သား ဆုံး ဖြတ် ချက်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
“ကပ်တာကို သူတို့ သဘောကျတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာသွားတာပေါ့။ အစတုန်းကတော့ နအဖ လုပ်တာကို လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ဘယ်လို တုံ့ပြန်ရင်ကောင်းမလဲ သူတို့ဘက်ကေ၀၀ါးနေတာလေ။ တကယ်လို့ ကန့်ကွက်မဲပေးရင် အရေးယူ လာမလား၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တို့၊ နေရပ်လိပ်စာတို့ ထည့်ရတဲ့ အခါကျတော့ သူတို့ကိုများ ဖမ်းလာမ လား၊ အဲလိုမျိုးသူတို့က စိုးရိမ်နေတာလေ။ အခုက ကျနော်တို့ အခြေခံဥပဒေသစ်ကို ကန့်ကွက်မဲ ပေးမှဘဲ ကျနော်တို့က ဒီတိုက်ပွဲမှာ အောင်မြင် မှာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ခါကျတော့ သူတို့က ဆုံးဖြတ်ချက် တခုကို ရသွားတာလေ။ ”
လှုံ့ဆော်စာများကို မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပြူတာကောလိပ်၊ မြစ်ကြီးနားဈေး အမှတ်(၁) နှင့်(၂)၊ ရန်ကြီး အောင် နှင့် ဒူကထောင် မနက်ခင်းဈေးများ၊ ဘူတာရုံ၊ မြစ်ကြီးနား(၁၄)ရပ်ကွက်၊ မြို့ပြင်ရှိ ကျေးရွာလေးရွာတွင် တပြိုင်တည်း ကပ်ခဲ့ပြီး ၀ိုင်းမော်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်၆ခုတွင် ကပ်ခဲ့ကြသည်။
ကချင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂက ယခုကဲ့သို့ လှုံ့ဆော်စာကပ်သည့်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစုံ တရာ အဖမ်းအဆီးမရှိခဲ့သော်လည်း မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုများမဖြစ်စေရန် ရဲနှင့် စစ်တပ်များကို လုံခြုံရေး ချထားခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂသည် မြစ်ဆုံရေကာတာဆန့်ကျင်ရေး၊ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေးစာများ မ ကြာခဏဆိုသလို ဒေသတွင်း ဖြန့်ဝေနေသည့် အဖွဲ့လည်း ဖြစ်သည်။
မဵက်မြောက်ရေးရာ - အင်တာဗဵြး
ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် မဲပေးခြင်းမပြုရန် ကချင်အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့က ညွန်ကြား
ဘီဘီစီ မတ် ၂၂ အစီအစဉ်
မတ် ၂၃၊ ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူထားတဲ့ KIO ပါတီဝင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ လာမယ့် မေလဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မဲပေးဖို့မလိုဘဲ ထောက်ခံမှုလည်းမလုပ်၊ ကန့်ကွက်မှုလည်း မလုပ်ဘဲ ရပ်တည်သွားကြဖို့ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ သဘောထား ညွန်ကြားချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ သိရရှိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာကြောင့် ဒီလို ကြားနေတဲ့ သဘောထားရှိတာလဲလို့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းလန်ဒေါင်းကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာ ---
ဂျိမ်းလန်ဒေါင်း ။ ။ ဒီထုတ်ပြန်ချက်က ဘယ်ဘက်မှ ဘက်မလိုက်ဘူးပေါ့ဗျာ၊ အခု ဗမာပြည်အရေး ဆိုလို့ရှိရင် အားလုံးဟာ ကိုယ့်ဘက်မှာပဲ ရပ်တည်ပြီးတော့ ပြောကြတာချည်းရှိတယ်။ ဒါ ကျနော်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ ကေအိုင်အိုအနေနဲ့ ကြားနေဝါဒလိုလို ထုတ်ပြန်ခြင်းဟာ ဒါ ကျနော်တို့ လူထုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သူတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စဉ်းစားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါစေ၊ ကျနော်တို့ကနေ တနည်းနည်းအားဖြင့် ချုပ်ခြယ်ခြင်း အဲဒါမျိုး သဘော မပေါက်အောင် ကျနော်တို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထုရဲ့ စိတ်သဘောထားသော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်န္ဓာကိုသော်လည်းကောင်း ထိ်းချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမပေါ်အောင်၊ အဲဒါ လူထုတွေက အဲဒီလိုခံယူဖို့ရန် ကျနော်တို့ စဉ်းစားပြီးတော့ အဲဒီလို ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတို့ဘက်က ဒီလိုကြားနေတဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် အစိုးရဘက်ကတော့ ဒါ သူတို့ကို သပိတ်မှောက်တဲ့အနေနဲ့ကော မယူဆနိုင်ဘူးလားရှင့်။
ဂျိမ်း ။ ။ ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့အချင်းချင်းရဲ့ ဒီ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးမှာ နားလည်မှု ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့မှ နားလည်မှုပေးနိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်း ဖြစ်တယ်၊ နောက်ပြီးတော့မှ တဦးအပေါ်တဦး နားလည်မှုရှိသင့်တာ ဘယ်အဆင့်လောက် ရှိသင့်သလဲ ဆိုတာလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာလည်း ကြာပါပြီ။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒီလောက် ဆန်းစစ်တစ် (sensitive) ဖြစ်မယ်လို့ ကျနော်တို့ မယုံကြည်ဘူး၊ အဲ မထင်ဘူး။ တော်တော်လေး အချင်းချင်းအပေါ်မှာ နားလည်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ခံယူတာတွေ ရှိတယ်။
ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတို့ဘက်က အခုလိုကြားနေမယ်ဆိုတာကို အစိုးရကိုရော အကြောင်းကြားပြီးပြီလားရှင့်။
ဂျိန်း ။ ။ ဒါတွေကတော့ ကျနော်တို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာ မြင်နေရတာပဲ။ ဒီဟာကို သူတို့လည်း ကောင်းကောင်း သိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အခုဟာက အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ သဘောထား ညွှန်ကြားချက် ထုတ်တာဆိုတော့လေ၊ အဲဒီတော့ အစိုးရဘက်ကရော ဒါကို သဘောတူပါသလားရှင့်။
ဂျိမ်း ။ ။ ဒီဟာ လူတိုင်းရဲ့ ခံယူချက်ကို ထုတ်ပြန်တာပဲဟာ သူတို့အနေနဲ့လည်း ဘယ်လိုမှ ကန့်ကွက် စရာမရှိပါဘူး။ ကာယကံအချင်းချင်း နားလည်မှု၊ အသိအမှတ်ပေးမှု ရှိပါတယ်။
ဘီဘီစီ ။ ။ တကယ်လို့များ အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ သူတို့ကို မဲပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ ဖိအား ပေးလာမယ်ဆိုရင်ကော ဘာဆက်လုပ်ဖို့ ရှိပါလဲရှင့်။
ဂျိမ်း ။ ။ ကျနော်တို့မှာ ဒီဆုံးဖြတ်ထားချက်ခြင်းဟာ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပါ၊ သူတို့လည်း နားလည်မှု ကျနော်တို့ကို ပေးပါလိမ့်မယ်၊ ကျနော်တို့ ယုံကြည်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီအချင်းချင်းအပေါ်မှာ ဖိနှိပ်မှုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျတော့ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး နားလည်မှု၊ အရေးပေးမှု၊ လေးစားမှုဟာ လျော့နည်း သွားတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရကလည်း ဒါတွေကိုတော့ နားလည်မှုရှိပါတယ်။
ကေအိုင်အို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းလန်ဒေါင်းပြောသွားတာပါ။ ကေအိုင်အိုက အမျိုးသားညီလာခံကို တချိန်လုံးထောက်ခံလာခဲ့ပြီးမှ အခုလို မဲမပေးဘဲ ကြားနေမယ် ဆိုတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုယူဆနိုင်ပါလဲ။ KIO နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်က ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ဦးမျိုးသစ်ကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ---
ဦးမျိုးသစ် ။ ။ KIOုအနေနဲ့ကတော့ သူလည်း ဝါရင့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အပြင် အမျိုးးသားညီလာခံမှာလည်းပဲ တလျှောက်လုံးတက်လာခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ကြီးဖြစ်နေတော့ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ငြင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ ဒါက ထောက်စရာကိစ္စကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တွက်မိလိမ့်မယ် ထင်တယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ ထောက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးရဲ့ ကြားမှာကျတော့ အမြင်မကောင်းတာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကန့်ကွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ ရေရှည်မှာ အကျိုးဆက် မကောင်းနိုင်တာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကြားနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာက နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်သဘောအရကော၊ ပိုပြီးတော့ လှုပ်သာလှည့်သာ လုပ်နိုင်ဖို့အရကော ကောင်းတယ်လို့ ယူဆပြီးတော့ အခုလို ရပ်တည်လိုက်တယ်လို့ တွက်ဆရတယ်ခင်ဗျ၊ ဒီလို ရပ်တည်ချက်ကို ဖော်ပြဖို့ရာအတွက်လည်းပဲ ဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ဆုံး အပတ်တွေထဲလောက်မှာ အစည်းအဝေး သေချာထိုင်ပြီးတော့မှ အခုလို ညွန်ကြားချက်ထွက်တာလို့ ကျနော် သိရတယ်ခင်ဗျ။
ဒေါ်သီတာနွယ် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့်၊ ဒါဆိုရင် KIO အနေနဲ့ နအဖဘက်က ဖိအားပေးမှာကို ထည့်တွက်ထားတဲ့ သဘောလားရှင့်။
ဦးမျိုးသစ် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ၊ ဖိအားပေးကောင်းလည်း ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ တွက်နိုင်ပါတယ်၊ ဒီလို အရင်တုန်းကလည်း ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ သာဓကတွေက အများကြီးရှိတော့လည်းပဲ ဒီဟာအပေါ်မှာ KIO အနေနဲ့က ရပ်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတာကို သူတို့ဟာ သူတို့မတွက်ဘဲတော့နေမှာမဟုတ်ဘူး၊ တွက်မှာပဲ။ တွက်တဲ့ကြားထဲကပဲ သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးတော့မှ အခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ပဲ ပြောရလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။
ဒေါ်သီတာနွယ် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့်၊ ကေအိုင်အို အဖွဲ့အတွင်းမှာကော ဒီညွန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို သဘောထားရှိတယ်လို့ကြားရပါလဲရှင့်။
ဦးမျိုးသစ် ။ ။ ကျနော်နဲ့ နီးစပ် ပတ်သက်တဲ့ လူတွေဆီက လာတဲ့သတင်းတွေအရ သက်ဆိုင်ရာ ကေအိုင် အို ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အခုလို ညွန်ကြားလိုက်တဲ့ ညွန်ကြားချက် သဘောထားအပေါ်မှာ သူတို့က အမြင်ရှင်းကြပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လို့ပဲ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရမှာပဲဗျ။
ဒေါ်သီတာနွယ် ။ ။ မြန်မာအစိုးရဘက်ကရော ဒါကို ဘယ်လို တုံ့ပြန်ခဲ့ပါလဲရှင့်။
ဦးမျိုးသစ် ။ ။ မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းပဲ ဒီကိစ္စက သူ့သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မိမိရဲ့ ပါတီ အဖွဲ့အ စည်း တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွင်းပဲ ညွန်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့က ဒီဟာအပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်စွက်ဖက်ချင်ရင်တောင်မှ စွက်ဖက်လို့မရတဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုအချိန်ဟာ ဘာပဲ ပြောပြော ခြောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာ ခြောက်၊ ဖိအားပေးလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာ ဖိအားပေးပေမယ်လို့ ချော့ရမယ့်နေရာမျိုးတွေမှာလည်းပဲ ချော့ပြီးတော့ လိုက်လျောမှုတွေကို ပြထားရမယ့်သဘောမျိုး ပြရမယ့် နှစ်ဖက်နည်းနာမျိုး ကျင့်သုံးရမယ့်ကာလဆိုတာလည်း ရှိနေတော့ စစ်အစိုးရကတော့ အဲဒီနှစ်ဖက်နည်းနာအတိုင်း ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ပဲ ယူဆရတာပဲခင်ဗျ။
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်က ဘီဘီစီသတင်းထောက် ဦးမျိုးသစ် သုံးသပ်ပြခဲ့တာပါ။
(ဘီဘီစီ မတ်လ ၂၂ ရက် ညပိုင်းအစီအစဉ်တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။)
တရုတ်စစ်တပ်တို.ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု က ဒီလို
သတင်း Record, မှတ်တမ်း
တိဗက်ကို တရုတ်အစိုးရ နှိမ်နှင်းတဲ့ကိစ္စကြောင့် ကမ္ဘာအနှံ့ဝေဖန်မှုတိုးပွား
China's Tibet Crackdown Sparks Global Criticism
The Chinese government’s heavy crackdown on the largest anti-China protest in decades has drawn international condemnation, threatening the success of its highly-anticipated Beijing Olympics.
Sun, Mar. 23, 2008 Posted: 12:07:20 PM EST
On Saturday,agroup of 30 well-known Chinese intellectuals urged Beijing to admit its policy is crushing dissidents in Tibet and its tactic of blaming violence on the Dalai Lama is failing.
"The one-sided propaganda of the official Chinese media is having the effect of stirring up inter-ethnic animosity and aggravating an already tense situation," the group said in an open letter posted on Boxun.com,aWeb site for overseas Chinese, according to the Washington Post.
its response to the two-week protests in Tibet. The Tibetan protest is highly sensitive topic in China and few people are willing to speak publicly on the government’s actions.The group also urged the government to protect freedom of speech and worship and permit citizens to make suggestions regarding government’s nationality.
It also urged open direct dialogue with the Dalai Lama.On March 10, anti-government protests by Buddhist monks erupted in Lhasa, Tibet’s capital, and anti-Chinese rioting in the city five days later killedapoliceman and 18 civilians, authorities said, according to Reuters.
China said 94 people have been injured in Tibetan areas, according to Xinhua – China’s official news agency.China has accused the Dalai Lama, the spiritual and secular leader of Tibet, of orchestrating the protests and violence in Tibet.
The Dalai Lama,aNobel Peace Prize winner, has called for direct talks with China to negotiate autonomy, but not complete independence, for Tibet.Tibet has been occupied by Chinese troops since 1950.China has banned foreign reporters in Tibet and has used its own media mouthpiece to spread propaganda against the Dalai Lama.
The Chinese Communist Party’s official newspaper, the People’s Daily, accused the Dalai Lama Sunday of having continued to plot violence against China after fleeing his homeland in 1959 afterafailed revolt against Beijing. The Dalai Lama now lives in India.
"They've successfully managed the messages available to the average Chinese citizen, and this has fueled broad public support foraheavy-handed approach to controlling unrest," said David Bandurski,aHong Kong University expert on Chinese media, according to CNN.
"There will be no nuances to Tibet coverage."Taiwan’s president-elect Ma Ying-jeou has said that if the situation in Tibet worsens then it would consider the possibility of not sending athletes to the Olympics, according to Reuters.The United States and the European Union have both opposed boycotting the Beijing Games over the crackdown, but an EU politician publishedaremark Saturday that European countries should not rule out threateningaboycott if violence continues, according to CNN.
"Beijing must decide itself; it should immediately negotiate with the Dalai Lama," European Parliament President Hans-Gert Poettering was quoted as saying by Germany's Bild am Sonntag newspaper. "If there continue to be no signals of compromise, I see boycott measures as justified.
"Earlier this month the U.S. State Department removed China from its human rights blacklist which included rogue states like North Korea and Burma (Myanmar). Secretary of State Condoleezza Rice had defended removing China by pointing to renewed dialogue with Beijing on human rights issues.
The Tibet conflict occurred during the same week as the report’s release, confronting the United States’ contention that China has improved its attitude toward human rights.
Ethan ColeChristian Post Reporterhttp://www.christia npost.com/ article/20080323 /31637_China' s_Tibet_Crackdow n_Sparks_ Global_Criticism _.htm
တရုတ်အိုလံပစ်အခက်တွေ.မည်လို. ဂျာမဏီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သတိပေး၊
တိဗက်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ နွေရာသီတွင် ကျင်းပ မည့် တရုတ်အိုလံပစ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်တယ် လို့ ဂျာမဏီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကသောကြာနေ့တွင် သတိပေးပြောကြားလိုက်သည်။
Germany Warns China Olympics at Risk
Saturday, March 22, 2008 5:45 PM EDT
BERLIN - Germany's foreign minister has warned China that its response to the crisis in Tibet may jeopardize the Summer Olympics in Beijing,anewspaper reported on Friday.
Frank Walter Steinmeier criticized the Chinese government's lack of transparency in the ongoing conflict, according to an interview with the newspaper Bild that will appear in Saturday's edition.
"This much is clear: the Olympic games don't work like they did 80 years ago," Steinmeier said according to an advance copy of the article made available by Bild Friday.
"You can't just host glamorous events for television while things are going topsy-turvy in your own backyard. The host has to allow thousands of journalists into the country _ you won't be able to sweep anything under the rug.
"Tibetan exile groups say 99 people have been killed inaChinese crackdown on protests against its rule of Tibet over the last few weeks. The protests began in Tibet and spread to other parts of China.
Chinese officials say 16 have died.Casualty figures and details about the protests and China's response have proven difficult to confirm because China is tightly controlling the information and keeping out all foreign journalists.
"The German federal government is saying to the Chinese government: be transparent! " the newspaper quoted him as saying. "We want to know exactly what is going on in Tibet. China is only hurting itself when it prevents outside observers from gettingasense of what the situation is.
"On Thursday, the last two remaining foreign journalists in Tibet _ Georg Blume of Germany and Kristin Kupfer of Austria _ were forced to leave the capital, Lhasa, according to Reporters Without Borders. Earlier this week, Economist correspondent James Miles andagroup of 15 Hong Kong reporters were forced out.Steinmeier also warned China to avoid any violent measures in its standoff with Tibetan protesters.
"A solution can only be found through dialogue," Bild quoted him as saying. "The Tibetans want to preserve their culture, China wants political stability _ with that in mind, the two sides need to approach one another.
"http://www.auburnpu b.com/articles/ 2008/03/23/ ap/regional/ europe/d8vhuvb8l .txt
သံဃာများကို သတ်ဖြတ်ရာတွင် တရုတ်နှင့် နအဖထပ်တူဟုတိဘက်အရေးလှုပ်ရှားသူများ ထုတ်ပြန်
ကျော်ထင်/ ၂၁ မတ် ၂၀၀၈ (ခေတ်ပြိုင်မှကောက်နှုတ်သတင်း)
ချင်းမိုင်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူများ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုစဉ်
ယခုလ (၁၀) ရက်မှစ၍ တိဘက်တွင် တရုတ် အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့မှုသည် ၂၀၀၇ ခု စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ နှိမ်နင်းပုံနှင့် တထပ်တည်းကျကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှား သူများက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသည်။
မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူ (၅၀)ခန့် ပါဝင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူများက ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ တရုတ်ကောင် စစ်ဝန်ရုံးရှေ့တွင် ယနေ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုစဉ် ထိုသို့ သတင်းထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးအများစုပါဝင်သော ဆန္ဒပြသူများတွင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ အဖွဲ့ ၀င်များလည်းပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခံနေရသောတိဘက်လူထုနှင့် သွေး စည်းညီညွတ်ခြင်းကို ပြသလို၍ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ဆန္ဒပြရာတွင်ပါဝင်သည့် မတိုးတိုးက “တိဘက်လူမျိုးတွေက မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီအရေး အတွက် လှုပ်ရှားနေသူတွေဟာ သူတို့နဲ့တသားတည်း ရှိနေပါလားဆိုတာ သိသွားမယ်၊ နောက် တခုက နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် တိဘက်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အကြမ်း ဖက်မှုတွေ လျှော့သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
တိဘက်လူထု၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေးတောင်းဆိုမှုကို အကြမ်းဖက်နည်းဖြင့် မဖြေရှင်းဘဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများဖြင့်ဖြေရှင်းရန်နှင့် တရုတ်အစိုးရက နအဖအားနည်းမျိုးစုံဖြင့် ထောက် ပံ့နေမှုများကို ရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုကြောင်း၊ လာမည့်သြဂုတ်တွင် အိုလံပစ်အားကစားပွဲကို အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုသည် အမည်းစက်ကြီးတခု ဖြစ်နေကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သည့် Regional Women Human Right Organization of Asia-Pacific forum on Woman Law and Development မှ ဖီဂျီနိုင်ငံသူ နာလီနယ်ဆင်ကလည်း “သေချာ တာကတော့ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ တိဘက်ရဲ့သီးခြားလွတ်လပ်စွာတည်ရှိမှုကို အသိမှတ်ပြု သင့်တယ်၊ တိဘက်ပြည်သူတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို အာမခံသင့်တယ်၊ လွတ်လပ်ရေးပေးပြီး တရုတ်တွေ ထွက်သွားသင့်တယ်” ဟု ပြောသည်။
သီးခြားလွတ်လပ်သော တိဘက်နိုင်ငံသို့ ၁၉၄၉ ခုတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်တပ်များ ၀င်ရောက် လာခဲ့ရာ တိဘက်လူထုက ကန့်ကွက်ဆန္ဒမှုများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၁၉၅၁ ခု တွင် တရုတ် အစိုးရနှင့် အချက် (၁၇) ချက်ပါသဘောတူညီချက်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သဖြင့် တရုတ်က တိဘက်အား လွပ်လပ်ရေးပေးလိုက်ကြောင်း ကမ္ဘာသို့ ကြေညာခဲ့သည်။
သို့သော် လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိသဖြင့် လူထုလှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၁၉၅၉ ခု မတ်လ (၁၀) ရက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လားမားနှင့် တိဘက် ပြည်သူ (၁) သိန်း ကျော်ခန့်သည် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည်။
တိဘက်နယ်မြေတွင် တရုတ်အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် တရုတ်ကတိဘက် အားဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်း (၄၉) နှစ်မြောက်အဖြစ် ကမ္ဘာတ၀န်းရှိ တိဘက်လူမျိုးများ၏ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် အိန္ဒိယရှိ တိဘက်လူမျိုးများက ယခုလ (၁၀) ရက်မှစတင် ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကုမ္ပဏီကြီးများနဲ့ထို့ပစ္စည်းများကို ရတဲ့နည်းနဲ့ ဖိအားပေးကြပါ၊ သပိတ်မှောက်ကြပါ၊ ငါတို.ဘာမှ မလုပ်ဘဲ နေလိုက်ရင် ငါတို. ညံ့သွားမည်။စီးပွားရေး ဝိသမလောဘကောင်းတွေ ကလဲ မြန်မာ့အရေးကို လျစ်လျူရှူးမည်၊
တရုပ်အိုလံပစ်ကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်နေသော စီးပွားရေးဝိသမလောဘ ကုမ္ပဏီကြီးများကို အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းများ က တိဗက်လူမျိုးတွေ နည်းတူ ထို.ကုမ္ပဏီကြီးများ၏်သက်ဆိုင်ရာစက်ရုံးများ၊အလုပ်ရုံးများဆီ သွားပြီး တစ်ခုခု လုပ်သင့်ပါကြောင်း ဆော်သြပါသည်။
Associated Press writer Lindsay Holmwood contributed to this story from New York.
Beijing Organizing Committee for the Olympic Games: http://www.bocog.org
Dream for Darfur: http://www.dreamfordarfur.org
General Electric Co.: http://www.ge.com
McDonald's Corp.: http://www.mcdonalds.com
Coca-Cola Co.: http://www.coca-cola.com
Volkswagen AG: http://www.volkswagen.com
BHP Billiton Ltd.: http://www.bhpbilliton.com
Adidas AG: http://www.adidas.com
Samsung Electronics Co.: http://www.samsung.com
Students foraFree Tibet: http://www.studentsforafreetibet.org
Omega Watches: http://www.omegawatches.com
Tibet adds pressure for Olympic sponsors
By JOE McDONALD,
AP Business Writer 16 minutes ago
McDonald's, Coca-Cola and other sponsors paid tens of millions of dollars to link their names with the Beijing Olympics. Now they're trying to mollify activists pressing for change on Tibet, Darfur and other issues, without angering China.
They have expressed concern over Tibet. Some talk privately to Beijing organizers. But sponsors insist they should stay out of politics.
"We all have to be careful about how we talk about this," said Chris Renner, president for China of sports marketing consulting firm Helios Partners. Its clients include sponsors Volkswagen AG, computer maker Lenovo Group and mining giant BHP Billiton Ltd.
The Olympics almost always attract activists interested in leveraging the popular event to publicize their causes.
At the 1996 Atlanta Games, sponsors faced boycott calls afteracounty where the beach volleyball event was to be held enactedameasure deemed anti-gay. In Sydney in 2000, there were protests about the environment and Australian aboriginal rights.
But the Beijing Games have generated more heat, in part because of an array of activist groups long critical of China's policies — and newer ones focused on its economic and diplomatic clout.
"Everybody knows we're pretty much on the biggest platform you can pick," Renner said.
Sponsors were already on the lookout for controversy over Sudan,adiplomatic partner and Chinese oil supplier, as well as press freedom, human rights and Tibet.
After protests last week by Tibetans against Chinese rule — and Beijing's crackdown — sponsors said they were watching events closely.
A few have turned to public relations specialists for advice, saidaperson familiar with the matter, who spoke on condition of anonymity because of the sensitivity of the issue.
Coca-Cola Co., Lenovo, McDonald's Corp. and others said this week they plan no changes in strategy.
Likely to face immediate pressure could be Lenovo, Coca-Cola and South Korea's Samsung Co., the three sponsors of the Olympic torch relay. The worldwide trek begins this month and will pass through Tibet and up Mount Everest.
Jiang Xiaoyu, executive vice president of the Beijing Olympics Organizing Committee, or BOCOG, vowed Wednesday that the anti-government riots in Tibet last week andasubsequent crackdown by authorities would not disrupt plans for the torch relay.
"We know the incidents are the last thing we want to see, but we firmly believe that the government of the Tibet Autonomous Region will be able ensure the stability of Lhasa and Tibet, and also be able to ensure the smooth going of the torch relay in Tibet," Jiang told reporters.
Abroad, Tibet activists say they will protest along the torch route in India, Britain and elsewhere to highlight complaints that Beijing is degrading the Himalayan region's distinctive Buddhist culture.
"We have no plans to change any of our activities related to the torch relay," said Christine F. Lau,aCoca-Cola spokeswoman in Beijing.
Samsung said inastatement: "We believe the Olympic Games are not the place for demonstrations and we hope that all people attending the games recognize the importance of this."
International Olympic Committee President Jacques Rogge said Sunday the body is "very concerned" about Tibet. But the IOC insists it is not inaposition to pressure China on political matters.
The Olympics is bothapremier advertising platform in the fast-growing China market andachance for sponsors to build ties with Chinese officials by backinganational prestige event.
The companies are counting on the Olympics to raise their profile in China, increase their market share in the country, and attract local partners, and they want to avoid jeopardizing access by doing anything that might upset communist officials. Licensing in China is highly subjective, and Beijing has retaliated in the past for unwanted foreign actions by canceling contracts or restricting market access.
Sponsor payments and other marketing revenues are expected to cover the games' operating costs, about $2.1 billion —afigure that does not include spending on venues and public facilities.
Until last week, the sponsors' biggest concern was pressure over Darfur.
Fronted by actress Mia Farrow and employing disciplined public relations strategies, Darfur activists have been prodding sponsors to lobby Beijing to help pressure Sudan to end the conflict.
Director Steven Spielberg withdrew as an artistic adviser to the games after pressure from Farrow, chairwoman of Dream for Darfur, which wants companies to lobby Beijing. It has warned China that it risks having its games remembered as the "genocide Olympics" and is issuing "report cards" to rate sponsors on their Darfur policies.
Dream for Darfur issueda"report card" in June on sponsors and plans to issue an update this month.
"The companies that getaC, D or F on this next report card will be the focus of our intensive activism between now and the games," said Jill Savitt, Dream for Darfur's executive director. She said the group will picket their headquarters and appeal to TV viewers to turn off their commercials during the games.
General Electric Co. scored highest ataC-plus in the earlier report, in part for donating medical equipment and aid to UNICEF, while Savitt said 13 companies got failing grades.
"The violence and brutality committed against the people in the Darfur region is appalling," said Deirdre Latour,aGE spokeswoman, in an e-mail. Still, she said, "It is not GE's role to use the games to influence government policy."
In the top tier of sponsors are 12 companies that reportedly have paid at least $100 million each to become Worldwide Olympic Partners.
Lenovo, the only Chinese company among the 12, took into account possible activism when it made its plans, said Robert J. Page, the company's Olympics public relations manager.
"All of these potential considerations are taken into the planning process," Page said. He declined to comment on violent scenarios, but said, "The potential for people to express their opinions is certainly something we have taken into consideration, and we would work with BOCOG on anticipating."
Lenovo hopes to use the Olympics to establish itself asaglobal brand following its 2005 acquisition of IBM Corp.'s personal computer unit. Asked whether the company worries about damage to its image, Page said, "That's notaconcern at this point."
"There is no question that the Olympic Games areapowerful force for peace," Page said. "We believe that the games will focus on all the good that is being brought to China, and we are proud to support that."
Coca-Cola, Adidas AG and Omega,aunit of Switzerland's Swatch Group, say they have talked privately to Beijing Olympics organizers.
They declined to give details, butaBOCOG employee said sponsors have asked for information on China's position on Darfur and other sensitive issues.
"They have held intimate discussions with our sponsorship department to better understand the issues and how it may affect them," said the employee, who asked not to be identified further because she was not authorized to talk to reporters.
"It's obviouslyafine balancing act that every single Olympics encounters," said Michael Payne,aformer IOC marketing director who now works asaconsultant. "The PR departments of each of the sponsors have got to be sensible in how they respond."
Robert A. Kapp,aformer president of the U.S.-China Business Council, said it's possible that popular anger, particularly among Americans concerned with human rights, may become so severe "that some companies may faceavery hard decision as to whether their highly visible support of the Olympics is causing so much damage that they need to reconsider their options."
"I could imagine some companies going back to their advertising departments and external PR advisers and seeing whether there are ways in which the company's presence in support of the Olympics can be reviewed with an eye toward these recent and tragic circumstances," Kapp said by telephone from Port Townsend, Wash.
"There may be different ways of presenting messages that would still support the Olympics, (but) would not cause undue anger and disenchantment among the people of China or at the level of the Chinese government," he said.
သာသနမောဠိ အဖြဲႚခဵပ်ြက တိဗက်ရဟန်းတော်မဵာိးံငြ့်ူပည်သူမဵာိးံငြ့်အတူ ရပ်တည်ေုကာင်း ထုတ်ူပန်
မိုးမခ အထောက်တော် (မိုးမခသတင်း)
၀၀၂မတ် ၁၆၊ ၂၀၀၈
တိဗက်ူပည်တငြ်ူဖစ်ပြားနေသည့် အစိုးရအာဏာပိုင်မဵားကူငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပသူ တိဗက်ဘုန်းတော်ုကီးမဵာိးံငြ့်ူပည်သူလူထုကို လက်နက်ူဖင့်ြိံမ်ိံငြ်းနေူခင်းမဵားကို စိတ်ထိခိုက်ရပၝေုကာင်း၊ အာဏာပိုင်မဵားက တိဗက်ူပည်သူတိုႚ၏ စစ်မန်ြသော လိုအင်ဆိံ္ဋကို နားထောင်စေလိုေုကာင်း သာသနမောဠိအဖြဲႚခဵပြ် ပဓာနာစေရ ဆရာတော်ုကီး ဦးကောဝိဒ ကိုယ်တော်တိုင် လက်မတ်ြရေးထိုးပီး သဘောထား ထုတ်ူပန်လိုက်သည်။
ဆရာတော်ုကီိးံငြ့်တကြ သာသနမောဠိအဖြဲႚခဵပြ်ူမန်မာရဟန်းတော်မဵားက တရုတ်ူပည်၏ အိုလံပစ် မီးရြးတိုင် ဆန်ဖရန်စင်္စကိုသိုႚ လာရောက်ူခင်းကိုလည်း ကန်ႚကက်ြထားခဲူ့ပီူးဖစ်သည်။
စစ်အစိုးရ မဟာမိတ် တရုတ်ိုံင်ငံကိုယ်တိုင်၏ လူႚအခငြ့်အရေးခဵြိးဖောက်မမြဵားေုကာင့်၎င်း၊ တရုတ်အစိုးရကူမန်မာစစ်အစိုးရကို အကာအကယ်ြပေးနေူခင်းေုကာင့်ူမန်မာူပည်သူတိုႚ လိုလားသော လတ်ြလပ်ရေိးံငြ့်ူငိမ်းခဵမ်းရေးပန်းတိုင်သိုႚ ရောက်ရြိရန်ြေိာံင့်ြေိံးနေူခင်းတိုႚေုကာင့် တရုတ်အိုလံပစ်ကို သပိတ်မြောက်ုကရေး၊ ကန်ႚကကြ်ုကရေး လပ်ြရြားမမြဵားတငြ်ူမန်မာလူမအြခငြ့်အရေး လပ်ြရြားသူမဵား၊ အဖြဲႚအစည်းမဵားနည်းတူ သာသနမောဠိကလည်း တသဘောတည်း ရပ်တည်သည့် သဘောထင်ရြားလာေုကာင်း တြေႚိုံင်သည်ဟု ပရိသတ်တဦးက ထင်ူမင်ခဵက်ပေးပၝသည်။
ူပန်ုကားရေးဆရာတော်မဵားကလည်း တိဗက် လူႚအခငြ့်အရေးအဖြဲႚအစည်းမဵား၊ ဘုန်းတော်ုကီးမဵာိးံငြ့် တိဗက် ဘာသာရေးခေၝင်းဆောင် ဒလိုင်းလားမားတိုႚထံသိုႚ မိမိတိုႚ၏ ကိုယ်ခဵင်းစာရပ်တည်ေုကာင်း ထုတ်ူပန်ခဵက်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးပိုႚႛုကရန်ေူပာဆိုပၝသည်။
တရုတ်စစ်တပ်က တီဗက်ဘုန်းကြီးနဲ.အဖြစ်မဲ့လူထုတွေကို ပစ်သတ်နေပြီ၊
မြန်မာရဟန်းတော်များ နဲ.ပြည်သူလူထုတွေ ပစ်သတ်ခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာ တီဗက်ခေါင်းဆောင် ဒလိုင်းလာမား၏ဂုဏ်ယူမှုထောက်ခံမှု အသံတွေကို ငါတို. ကြားခဲ.ရသည်၊ ဒီနေ. တ်ီဗက်လူမျိုးတွေ အသတ်ခံနေရသည့်အချိန်မှာ သာသနာ့မောဠိလို.ခေါ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာရဟန်းတော်များအနေနဲ. မျက်စိမှိတ်၊နှုတ်ပိတ်မနေသင့်ဘူး လို.တိုင်းရင်းသားအသံမှ ပြောကြားလိုကြောင်း၊
Deaths reported in Tibet as China blames Dalai Lama
By Chris Buckley and Lindsay Beck 16 minutes ago
Independence protesters burned shops and cars in the Tibetan capital Lhasa on Friday and Chinese police were reported to have shot dead at least two people, in the fiercest unrest in the region for two decades.
China accused supporters of the exiled Dalai Lama of "masterminding" the uprising, which shatters its carefully-cultivated image of national prosperity and harmony in the buildup to the Beijing Olympic Games.
A spokesman for the Tibetan spiritual leader called the allegation "absolutely baseless." The Dalai Lama earlier appealed to China to stop using force and begin dialogue with Tibetans. Similar protests in the past have been crushed by security forces with gunfire and mass arrests.
Peaceful marches by Buddhist monks in recent days have given way to angry crowds confronting riot police.
"Now it's very chaotic outside," an ethnic Tibetan resident said by telephone. "People have been burning cars and motorbikes and buses. There is smoke everywhere and they have been throwing rocks and breaking windows. We're scared."
Radio Free Asia, quoting witnesses, said Chinese police fired on protesters, killing at least two. A source told Reuters that two Tibetans were shot dead near the Ramoche Monastery near the capital, Lhasa. The deaths could not be further verified.
Residents near the Jokhang temple in old Lhasa said they had seen lines of riot police, but none spoke of gunfire. "We are waiting to see what will happen tomorrow," said an ethnic Tibetan woman. "It could get much worse."
Up to 400 protesters gathered aroundamarket near the Jokhang temple early on Friday and were confronted by about 1,000 police, according toawitness cited by Matt Whitticase of the Free Tibet Campaign in London.
An ethnic Tibetan resident said some protesters shouted for independence from China. "It's no longer just the monks. Now they have been joined by lots of residents," the man said.
China's role in Tibet has becomeafocus for its critics in the run-up to the Olympics, with marches held worldwide this week to mark the 49th anniversary ofafailed uprising against Beijing's rule that led to the Dalai Lama fleeing to India.
Those marches apparently galvanized Buddhist monks to take to Lhasa's streets, defyingaheavy police presence and reports of lockdowns at several monasteries.
"These protests areamanifestation of the deep-rooted resentment of the Tibetan people under the present governance," the Dalai Lama said inastatement.
"I therefore appeal to the Chinese leadership to stop using force and address the long-simmering resentment of the Tibetan people through dialogue with the Tibetan people."
Chinese authorities were uncompromising. "The government of Tibet Autonomous Region said Friday there had been enough evidence to prove that the recent sabotage in Lhasa was 'organized, premeditated and masterminded' by the Dalai clique," Xinhua news agency reported.
"The violence, involving beating, smashing, looting and burning, has disrupted the public order, jeopardized people's lives and property, an official with the government said."
But China was "fully capable of maintaining social stability" in Tibet, the official said.
A spokesman for the Dalai Lama, contacted in the Indian town of Dharamsala, the major centre for Tibetan exiles, said of the allegation against him: "This is absolutely baseless and his holiness has made his stand very clear."
The protests present hard choices for President Hu Jintao, who was Communist Party boss in Tibet in 1989 when China imposed martial law to quell anti-Chinese protests.
U.S. URGES RESTRAINT
The eruption of discontent has becomeadiplomatic issue, with the United States and European Union urging Beijing to avoidaharsh response.
U.S. ambassador to China Clark Randt told senior Chinese officials of Washington's concern over the violence in Lhasa, State Department spokesman Sean McCormack said.
"He took the opportunity, because of what was going on in Lhasa, to urge restraint on the part of the Chinese officials and Chinese security forces," McCormack told reporters.
The devoutly Buddhist Tibetan people of the vast mountainous region have won international sympathy, but virtually no international recognition of claims to sovereignty, since Chinese troops invaded in 1950.
Nine years later came the failed uprising and the flight of the Dalai Lama and thousands of his supporters into exile.
A Han (majority) Chinese resident of Lhasa said the protests were being directed at the city's Han Chinese population, which has mushroomed in recent years with China's economic boom. "The Han Chinese are really scared," he said.
The demonstrations in Lhasa spilled over into at least one other ethnic Tibetan area of China.
Hundreds of monks from the Labrang monastery in the northwestern province of Gansu ledamarch through the town of Xiahe, the Free Tibet Campaign said, citing sources in Dharamsala in India, home to Tibet's government-in-exile.
Aboutadozen Tibetans living in exile in India were arrested when they tried to storm the Chinese embassy in New Delhi late on Friday.
The International Campaign for Tibet said it strongly condemned the "imposition of martial law," though there was no word from China that martial law had been imposed.
(Additional reporting by Ben Blanchard and Benjamin Kang Lim in Beijing, Jonathan Allen in New Delhi, Sue Pleming in Washington, Bappa Majumdar in New Delhi and Huw Jones and Adrian Croft in Brussels; editing by Nick Macfie and Andrew Roche)
တရုတ်စစ်တပ်ကလဲ ဗမာစစ်တပ်နည်းတူ တီဗက်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ဝိုင်းရံထားပြီ၊
ယဉ်ကျေးတဲ့လူအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ. လူမျိုးတွေအတွက်စော်ကာခံနေရတဲ့ခေတ်ကြီးလား? သူတော်ကောင်းတရားတွေ ပပျောက်တဲ့ခေတ်ကြီးလာ?`
VDO (1). VDO (2)
Chinese troops surround monasteries in Tibet: rights group
by Guy Newey
Troops have surrounded the three biggest monasteries in the Tibetan capital Lhasa,arights group said Friday, as fears mounted ofasevere crackdown following protests against Chinese rule.တရုပ်အုပ်ချုပ်မှုကိုဆန်.ကျင့်ဆန္ဒပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတီဗက်တို.မြို.တော်လာစာရှိတီဗက်ဘုန်းကြီးကျောင်းသုံကျောင်းကို တရုပ်စစ်တပ်ကဝိုင်းရံထားပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နင်းလာမှာကို စိုးရိမ်းတယ် လို. အခွင်.အရေးအဖွဲ.တစ်ဖွဲ.က သောကြာနေ.တွင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားပါသည်၊
Chinese authorities locked down the sites afterathird day of protests in Lhasa saw hundreds of Buddhist monks demonstrate, the International Campaign for Tibet said။လာစာမြို.မှာတတိယနေ.မြောက်ဆန္ဒပြရာမှာ ရာနဲ.ချီသောဆန္ဒပြဘုန်းကြီးတွေကို တွေ.ခဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ထိုနေရာကို တရုတ်အာဏာပိုင်းများက တာဆီးပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတီဗက်အရေးလှုပ်ရှားအဖွဲ.က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
"There is an intensifying atmosphere of fear and tension in Lhasa at the moment," International Campaign for Tibet spokeswoman Kate Saunders, who spoke to people in the capital, told AFP.
The protests -- believed to the biggest in Tibet in two decades -- coincided with demonstrations in India this week by Tibetans seeking to pressure China over its rule of the Himalayan region ahead of the Beijing Olympics in August.
The protests also coincided with the anniversary of an uprising in 1959 against Chinese rule that Tibetan groups say was brutally crushed and led to the deaths of tens of thousands of people.
Saunders said the initial response by Chinese authorities to the Lhasa protests had been more muted than in the past, although they had already begun to question monks, while other rights groups reported protesters being detained.
"So far there is no evidence that the authorities will depart from their standard pattern when faced with strong dissent -- repression, crackdown and re-education," she said from London.
Inafirst rebuke fromaforeign government, Canadian Foreign Minister Maxime Bernier on Thursday expressed "serious concerns" about China's actions.
The International Campaign for Tibet said monks at the Sera monastery in Lhasa were onahunger strike, while there were also reports of the protests spreading to two remote rural monasteries within Tibet.
Tourists have been prevented from entering the main monasteries -- Ganden, Drepung and Sera -- in Lhasa, the campaign said inastatement.
A popular agency for tourists travelling to Tibet, based in neighbouring Sichuan province, told AFP on Friday that five monasteries, including the three largest in Lhasa, were all closed to visitors.
A spokesman for the Tibet Autonomous Region, who gave his name only as Fu, denied there had been any arrests, that monasteries had been surrounded, or that protests had spread to rural Tibet.
He insisted the monasteries were open to tourists. The foreign ministry in Beijing had no immediate comment when contacted by AFP on Friday.
On Thursday, foreign ministry spokesman Qin Gang conceded there had been protests in Lhasa, but said the situation had been "stabilised."
Pro-Tibet groups and Amnesty International said tear gas and electric prods had been used to disperse the initial protests, while some monks had been detained.
In India, police on Thursday arrested 100 Tibetans who were trying to walk to Tibet inaMahatma Gandhi-style peaceful march.
"We are witnessing the most visible wave of peaceful dissent against Chinese rule in the Tibetan capital for the past two decades," said Sophie Richardson, Asia advocacy director at Human Rights Watch.
"What is unusual is the harsh crackdown on similar protests in democratic India and Nepal, which raises concerns about whether China is pressuring those countries to silence Tibetans."
The last protests in Tibet on this scale took place during pro-independence demonstrations in 1989, when Chinese authorities declared martial law in Lhasa to quell the monks.
China sent troops in to "liberate" Tibet in 1950, and officially began its rule of the regionayear later.
The failed 1959 uprising that the protesters commemorated this week forced Tibetan spiritual leader the Dalai Lama to flee to India.
န.အ.ဖ ၏ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအတည်ပြုရေးနှင့်ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရေးအပေါ် ဂျပန်းနိုင်ငံရောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအဖွဲ.မှသဘောထားကြေညာချက်
Read this doc on Scribd:7STEP ROAD MAP OF BURMESE REGIME
စစ်အစိုးရ၏ပြည်သူ.ဆန္ဒခံယူပွဲ(Refrendum) အပေါ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ သဘောထား
MR.Gambari ခရီးစဉ်အဆုံးသတ်ပြီ၊ စစ်အစိုးရထိုးနှက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ.ပါ၊
အောက်ကဗွီဒီအိုကိုပြန်ကြည့်ပါကွာ၊ကိုနစ်နေမန်း Post မှ။သူပြန်လာတာက ဒီဗွီအိုဇာတ်လမ်းအတိုင်းပါပဲ၊
UN envoy meets Myanmar ministers amid rebuffs
by Hla Hla HtaySun Mar 9, 9:11 AM ET
UN special envoy Ibrahim Gambari Sunday metagroup of mid-level ministers inavisit to Myanmar that so far appears to have failed to push the ruling junta into making any concessions on an upcoming vote.
Twice during his trip the regime has openly rebuffed his diplomatic overtures, while he has been denied access to key decision-makers such as junta leader Than Shwe, casting real doubt on how much his mission can achieve.
Gambari met Myanmar's minister of health, minister of planning, deputy foreign minister and civil service chairman atamilitary guesthouse on Sunday morning,aUnited Nations statement said.
It gave no details on what was discussed.
A government official said earlier that Gambari met the information minister, Brigadier General Kyaw Hsan, but the UN did not mention the meeting.
The Nigerian diplomat was grantedarare meeting here Saturday with detained democracy leader Aung San Suu Kyi.
However, that was quickly overshadowed when the junta rejected his offer to send foreign observers toaplanned constitutional referendum in May designed to pave the way for multi-party elections in 2010.
Gambari's visit had already run into trouble Friday when Kyaw Hsan accused him of bias in favour of Aung San Suu Kyi, and said the junta would not make any changes to the constitution, which bars her from running.
The UN envoy had been expected to leave military-run Myanmar on Sunday, but extended his trip by one day despite the setbacks.
"His visit has been extended, so he will go back tomorrow. His schedule is always changing," saidagovernment official who did not want to be named because he was not authorised to speak to the media.
Gambari had arrived Thursday aiming to push the junta to include Aung San Suu Kyi and her National League for Democracy (NLD) party in the referendum and elections.
The constitution would bar Aung San Suu Kyi from the polls because of her marriage toaforeigner, whileanew law limits the NLD's ability to campaign by criminalising public speeches and leaflets about the referendum.
Gambari offered UN technical assistance and help with providing observers for the referendum inameeting Friday with members of the commission charged with organising the vote -- proposals rejected flatly by the junta.
Myanmar analyst Win Min said the junta had turnedadeaf ear to everything Gambari had to say so far.
"They are just going their own way, they have refused everything," he told AFP in Bangkok.
State newspaper the New Light of Myanmar gave an account Sunday of Gambari's meeting with the commission.
"Mr Gambari said he would like Myanmar to invite observers to win the trust of the international community over the country's work programmes," the newspaper reported.
"(Commission member) Thaung Nyunt replied that holding the referendum for the constitution is within the State sovereignty."
Nobel peace prize winner Aung San Suu Kyi has spent 12 of the last 18 years under house arrest, and is allowed little contact with the outside world.
If held, the 2010 elections would be the first since she led the NLD toalandslide victory in 1990 elections,aresult never recognised by the regime.
Meanwhile, adding her weight to Gambari's efforts, President Gloria Arroyo of the Philippines urged Myanmar to permit foreign observers asa"small but modest step" toward democracy.
"It isasad day for democracy and our region that Myanmar has rejected the proposal put forward by the UN for outside observers to the May election," she said inastatement.
"A central pillar of democracy isafree and fair election," Arroyo added. "Outside observers are notathreat to any nation's sovereignty. Rather, the participation of outside election observers isasign of strength."
Gambari began trying to open upadialogue between the opposition and the regime followingaviolent crackdown in September on anti-government protests led by Buddhist monks, which left at least 31 dead, according to UN figures.
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဂမ်ဘာရီနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့မျှော်လင့်
ဒေါ်လှလှသန်း - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) ဒေါ်လှလှသန်း - နားဆင်ရန် (MP3)
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဘရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီ (Mr Ibrahim Gambari) ဟာ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ စက်တင်ဘာလက ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို တတိယအကြိမ် ရောက်ရှိတဲ့ လက်ရှိခရီးစဉ်အတွင်း ဒီနေ့မှာတော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ သံတမန်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၃ ရက်ကြာမယ်လို့ယူဆရတဲ့ သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်မှာ
ဒါပေမယ့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီအနေနဲ့ အရင် ခရီးစဉ်တွေတုန်းက တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒီတခေါက် တွေ့ဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရဲ့ စောစောပိုင်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း တိုင်းရင်းသားအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေက မစ္စတာဂမ်ဘာရီနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ တွေ့ခွင့်ရဖို့ကိုလည်း ဌာနေမှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရုံးကို မေတ္တာရပ်ခံထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တကယ်လို့ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ရင် ဘာတွေတင်ပြဖို့ စီစဉ်ထားသလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက်စ်ပါတီ (ဇက်အန်န်စီ) ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ စီအာပီပီ ကိုယ်စားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးကျင့်ရှင်းထန်ကို ဒေါ်လှလှသန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီနေ့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီက မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီး ဌာနချုပ်ကပြောတာတော့ ဒီတခါ အရင်တုန်းက မတွေ့ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဦးကျင့်ရှင်းထန်တို့ရော သူနဲ့တွေ့ဖို့အလားအလာ ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ တကယ်လို့ တွေ့ခဲ့ရင်ရော ဘာတွေတင်ပြဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလဲ။
“ကျနော်တို့ကတော့ တွေ့ဖို့ တဖွဖွတောင်းထားတာပဲ။ ဒီတခါတော့ အဲလိုကြားနေတော့ တကယ်ပဲ ဖြစ်တော့မလားဆိုတာကတော့ ဘာမှ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ယူအန်န်ဒီပီမှာ တွေ့ချင်တယ်ဆိုတာတော့ လုပ်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ တွေ့ရင် ပြောချင်တာကတော့ ဟိုးတုန်းက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၉၂ ယောက်က တင်ပြထားတဲ့ဟာမှာ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ အင်မတန်မှ သန့်ရှင်းတဲ့၊ တရားမျှတတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ပြောထားတာ။ အဲဒါပဲ ထပ်ပြောဖို့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လူမျိုးစုအနေနဲ့လည်းပဲ တွေ့ချင်တယ်ဆိုတာ တောင်းဆိုဖို့ပါပဲ။ အဲလိုဆိုရင် အားလုံးအတွက် ဒီဟာတွေပဲ အရေးကြီးမှာပေါ့။
“ကျနော်တို့ပြောရမှာက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အကြိမ်ကြိမ် ခင်ဗျားလာပေမယ့်လည်းအခုထက်ထိ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ အခုက အခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံဖို့ မေလမှာ လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ဒီကြားထဲမှာ ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ အခု ခင်ဗျားလာတာ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သူ့ကို ပြန်မေးရမှာပါ။”
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကလည်း မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းထားတာကတော့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီ အခုလုပ်နေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အုပ်စုအားလုံး ပါဝင်ရမယ်ပေါ့။ အထူးသဖြင့် အုပ်စုအားလုံးတို့ဆိုတာ အတိုက်အခံ အန်န်အယ်လ်ဒီပါတီရော၊ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေရောဆိုပြီး တိုက်တွန်းထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီအနေနဲ့ ဒီတခေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းပြောကြားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့ ဖြစ်လာမလာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ အခုလက်ရှိအနေအထားမှာ ဦးကျင့်ရှင်းထန်တို့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းထံကို စာတင်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါဦး။
“ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ တင်ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ အချက် ၃ ချက် တောင်းထားပါတယ်။ ပထမအချက်က နအဖအစိုးရကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ လုံခြုံရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာကို ထောက်ခံထားတဲ့အချက်အပါအ၀င် လုံခြုံရေးကောင်စီက မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာ ချမှတ်ထားတဲ့ဟာကို တသွေမတိမ်း အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ လိုက်နာဖို့၊ ပြောပေးဖို့ အချက်တချက်ပါတယ်။
“ဒုတိယအချက်ကတော့ အခု အတည်ပြုပေးဖို့ဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေဟာ အမှန်မှာတော့ တဖက်သတ်ရေးထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အတိုက်အခံအုပ်စု လုံးဝမပါဘူး။ ပြီးတော့ Cease Fire ဆိုတဲ့ လူမျိုးစုအုပ်စုတွေကလည်း သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့၊ သူတို့တင်ပြလို့ရမယ်ထင်တဲ့ဟာကိုလည်း လက်မခံဘူး။ အဲဒီအခြေခံဥပဒေဟာ ယူအန်န်အနေနဲ့ လက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ ကြေညာပေးဖို့။
“တတိယအချက်မှာတော့ အဲဒါတွေကို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီကနေ မြန်မာအစိုးရကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးဖို့၊ အားလုံးပါဝင်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ အချက်တွေပါတယ်။”
တကယ်လို့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီနဲ့ ဒီတခေါက်တွေ့ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော အဲဒီအချက်တွေ တင်ပြဖို့ ရှိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီအချက်တွေကို ကျနော်တို့ တင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။”
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ဒို.အရေး၊ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ဒို.အရေး၊ဗမာစစ်အစိုးရ ဖြုတ်ချရေး၊ဒို.အရေးဆောင်ပါးဖတ်ရှူရန်၊ ရခိုင်မျိုးချစ်ပညာရှင်ဒေါက်တာအေးကျော်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသတင်းကိုရခိုင်လူမျိုးများသာမကကျန်ရှိသည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအတွက်လည်အများကြီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်၊ဒေါက်တာအေးကျော်ဟာရဲရင့်ပြီးသတ္တိပြည့်ဝသည့်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်၊ထို.ကြောင့်၊သူ.ဆုံးရှုံးမှုဟာအများဆုံးရှုံးမှုပါ၊ကျန်းရစ်သူမိသားစုဝင်များနဲ.ရခိုင်ပြည်သူများနည်းတူထပ်တူထပ်မျှကြေးကွဲဝမ်းနည်းပါကြောင်းတိုင်းရင်းသားသံမှတင်ပြလိုက်ပါသည်၊
Min Ko Naing Birth Day
MARCH 25 PEOPLE'S ANGER UPRISING
No Border Guard Force, Yes to Freedom
၈၈တို.၏ရဲရင့်သတ္တိံ 88 Courage
နာဂစ်မုန်တိုင်းပုံရိပ်များ Nargis Victims
U Win Tin! You Are Our Hero!
Win Tin, 79, speaks to the reporters after his release from Yangon's Insein Prison, in Yangon September 23, 2008. (REUTERS/Aung Hla Tun)
Blog Archive အရင်စာမျက်နှာများရှာဖွေရန်
Monk-Led Protests Show Buddhist Activism AP Pos...
အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲ ပြန်ဝင်ရန် ...
ဒီသတင်းကို ဖတ်မိတဲ့အခါ ငါတို့ရဲ. တိုင်းပြည်းဟာ လူသ...
Gambari misled UNSC: 88 generation students Mungp...
ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို ကန့်ကွက်ရန် ကချင်ကျောင်းသားမျာ...
မဵက်မြောက်ရေးရာ - အင်တာ...
တရုတ်စစ်တပ်တို.ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု က ဒီလိုံ
တိဗက်ကို တရုတ်အစိုးရ နှိမ်နှင်းတဲ့ကိစ္စကြောင့် ကမ္ဘာ...
တရုတ်အိုလံပစ်အခက်တွေ.မည်လို. ဂျာမဏီ နိုင်ငံခြားရေး...
သံဃာများကို သတ်ဖြတ်ရာတွင် တရုတ်နှင့် နအဖထပ်တူဟုတိဘ...
တရုပ်အိုလံပစ်ကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်နေသော စီးပွား...
သာသနမောဠိ အဖြဲႚခဵပ်ြက တိဗက်ရဟန်းတော်မဵာိးံငြ့်ူပည်...
တရုတ်စစ်တပ်က တီဗက်ဘုန်းကြီးနဲ.အဖြစ်မဲ့လူထုတွေကို ပ...
တရုတ်စစ်တပ်ကလဲ ဗမာစစ်တပ်နည်းတူ တီဗက်ဘုန်းကြီးကျောင...
စစ်အစိုးရ၏ပြည်သူ.ဆန္ဒခံယူပွဲ(Refrendum) အပေါ် မွန်ပြ...
MR.Gambari ခရီးစဉ်အဆုံးသတ်ပြီ၊ စစ်အစိုးရထိုးနှက်ထာ...
UN envoy meets Myanmar ministers amid rebuffs by...
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဂမ်ဘာရီနဲ့ ဆွေးနွေးဖို...
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သမားများ
မြန်မာ့မီဒီယာ၊ ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု လေ့လာစောင့်ကြည်ရေး
Ethnic Nationalities Webpages and Others
့Update News from Bloggers
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီအရေးအခြေအနေ ပုံဖေါ်ပြကွက်။ - ဖိုင် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရန် - http://www.mediafire.com/?zqx0nd2dttz burma-democratic-diagram3 - UploadaDocument to Scribd Read this document on Scribd: burm...
Panty Award Group